Hamachi ကို virtual ကွန်ရက်များအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကများစွာသောအခြားအသုံးဝင်သော features တွေ, သင်နှင့်ဤဆောင်းပါးတွင်ကူညီပေးပါမည်သည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပါရှိသည်။ သငျသညျ hamachi အပေါ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူဆော့ကစားခင်မှာဆော့ဖ်ဝဲကို Install လုပ်ခြင်း, သင် installation ကိုအထုပ်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ တရားဝင် website တွင်ပိုကောင်းချက်ချင်းတစ်ချိန်တည်းတရားဝင် website ကနေ Hamachi Download နှင့်မှတ်ပုံတင်ရန်။
အဆိုပါ Hamachi အတွက်အပြာရောင်စက်ဝိုင်း fix လုပ်နည်း
အဆိုပါ Hamachi အတွက်ကစားဖက်အနီးလူ၏ nick အပြာရောင်စက်ဝိုင်းပုံပေါ်နေလျှင်, ကောင်းသောအရာမကကတိပေးမထားဘူး။ ဒေတာအပိုဆောင်း repeater ကိုအသုံးပြုဖို့အဘို့ဤအသီးသီးတိုက်ရိုက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုဖန်တီးရန်ပျက်ကွက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများဖြစ်ပြီး, ping ရဲ့ (အောင်းနေချိန်) အလိုရှိသောခံရဖို့အများကြီးစွန့်ခွာ။ ဤအမှု၌အဘယ်သို့ပြုသနည်း
Program ကို Hamachi အတွက်အသစ်တခုကွန်ယက်ကိုဖန်တီးပါ
Hamachi အစီအစဉ်ကိုကွဲပြားခြားနားသောပြိုင်ဘက်နှင့်လဲလှယ်အချက်အလက်များဂိမ်းခွင့်ပြု, တစ်ဦး local area network emulates ။ စတင်ခဲ့ပြီးရဖို့, သင် Hamachi server ကိုကနေတဆင့်ရှိပြီးသားကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင် name နဲ့ password ကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သောဒေတာဒါပေါ်, ဂိမ်းရဲ့ဖိုရမ်များအပေါ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များရရှိနိုင်ဖြစ်ကြပြီး။
လုံးဝ Hamachi ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
အလွန်မကြာခဏဖျက်ဖိုင်တွဲဒါမှမဟုတ် connection ကိုပုံမှန်အတိုင်း Hamachi ၏ပြီးပြည့်စုံသောဖယ်ရှားရေးမှုမဟုတျကွောငျးတွေ့ကြုံတတ်၏။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျဟောင်းဗားရှင်း၏ပိုသစ်သောဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားသောအခါအမှားပေါ်လာစေခြင်းငှါမပယ်ရှားနေကြပြီး, ရှိပြီးသားဒေတာများနှင့်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူဖွယ်ရှိသည်အခြားပြဿနာများကို။ ဤဆောင်းပါး၌အချို့ထိရောက်သောနည်းလမ်းများကိုလုံးဝ Hamachi ဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်ဟုတင်ပြပါလိမ့်မည်, ဤအစီအစဉ်သို့မဟုတ်မလိုသည်။
ကွန်ယက်ကိုဂိမ်းကစားဘို့အ Hamachi software ကိုဖွင့်သတ်မှတ်
Hamachi - ရိုးရှင်းသော interface နဲ့အများကြီး options များနှင့်အတူပေးအပ်သည်အင်တာနက်မှတဆင့်ဒေသခံကွန်ရက်တည်ဆောက်ရေးများအတွက်နေရာလေးကိုလျှောက်လွှာ။ ကွန်ယက်ပေါ်မှာကစားစေရန်, သငျသညျအနာဂတျမှာတည်ငြိမ်စစ်ဆင်ရေးသေချာကူညီနိုင်ဖို့ကနဦး settings ကို login ထွက်သယ်ဆောင်ရန်၎င်း၏ ID ကို, စကားဝှက်ကိုသိရပေမည်။
ကျနော်တို့ကွန်ယက်ကို adapter Hamachi ချိတ်ဆက်၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေး
Hamachi - သင်ကအင်တာနက်ကတဆင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံကွန်ရက်များတည်ဆောက်ခွင့်ပြုတဲ့အတွက်အထူးဆော့ဖ်ဝဲ။ အတော်များများကဂိမ်းကစား Minecraft, ကောင်တာ Strike, စတာတွေကစားရန်အစီအစဉ်ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ် setup ၏ရိုးရှင်းနေသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်တော်တော်လျင်မြန်စွာတညျ့သောကွန်ယက်ကို adapter ချိတ်ဆက်ပြဿနာများတွေ့ကြုံခံစားပေမယ့်အသုံးပြုသူတချို့အရေးယူမှုလိုအပ်ပါသည်။
ဘယ်လိုမှားယွင်းမှုတစ်ခုရှိလျှင်, Hamachi အတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်
ဒါကြောင့်သင်ပထမဦးဆုံး Hamachi စတင်ပြီးသားကစားသမားနှင့်အတူမည်သည့် network ကိုချိတ်ဆက်ရန်စီးကျလာတယ်ဒါပေမယ့်ကွန်ပျူတာတခုတခုအပေါ်မှာအမှားလည်းမရှိတစ် LogMeIn ဝန်ဆောင်မှုမချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျနော်တို့မှတ်ပုံတင်အပေါငျးတို့သတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုကြည့်မည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်မှတ်ပုံတင်ရေး 1. မှတ်ပုံတင်ခြင်းအဆိုပါအစီအစဉ်၏တာဝန်ရှိသူတဦးက်ဘ်ဆိုက်ကနေတဆင့်အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Hamachi မှတဆင့်ဆာဗာကွန်ပျူတာဂိမ်းဆော့ဖျဝဲ Create
တိုင်းအွန်လိုင်းဂိမ်းအသုံးပြုသူများကို connect တံ့သောမှဆာဗာရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန္ဒရှိပါကလုပ်ငန်းစဉ်ထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်သည့်မှတဆင့်ဟာ host အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာဒီဂိမ်းစိတ်ကြိုက် Programs ကိုအများဖြစ်ကြ၏, ဒါပေမယ့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရှင်းနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်အသုံးပြုမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေပေါင်းစပ်ပြီး, ထို Hamachi ကိုရွေးချယ်ပါ။
အတော်များများကပထမဦးဆုံးရေရှည်မှာ program ဖို့ကြိုးစားနေသည့်အခါထိုကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်, အဲဒီနောက် Self-စမ်းသပ်မယျအသုံးဝင်သည်ဖြစ်သော Hamachi, run နေကြသည်။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်သည်၎င်း၏ရိုးရှင်းနှင့်အတူသင်အံ့သြသွားလိမ့်မည်! ဒီတော့အဓိကပြဿနာဖြစ်သောသင်တို့ကိုအဖြေရှာတဲ့ပြတင်းပေါက်ရှေ့မှာ - ကို "ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်အတန်း: တော့ဘူး။ "
ဤပြဿနာကိုအတော်လေးမကြာခဏဖြစ်ပေါ်ခြင်း, ရလဒ်များကိုကတိပြု - မဖြစ်နိုင်ပါကွန်ယက်၏အခြားသင်တန်းသားများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ။ မှားယွင်းနေ Network configuration များ, client ကိုသို့မဟုတ်လုံခြုံရေးဆော့ဖ်ဝဲ: အဆိုပါအကြောင်းပြချက်အတော်လေးတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါသည်။ နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးကြပါစို့။ ဒါကြောင့်အဘယျအ Hamachi အတွက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတွေနဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိသည့်အခါလုပ်ဖို့?
Program ကို Hamachi အတွက် slot နှစ်ခု၏နံပါတ်တိုးမြှင့်
Hamachi တပြိုင်တည်း5client များအထိချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူဒေသခံတစ်ဦးကွန်ယက်ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်အခမဲ့ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်သောလျှင်ဤကိန်းဂဏန်းက 32 သို့မဟုတ် 256 သင်တန်းသားများကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, အသုံးပြုသူပြိုင်ဘက်များ၏မှန်ကန်သောအရေအတွက်ကိုနဲ့ကြေးပေးသွင်းဝယ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ရဲ့ပြုမယ့်ပုံကိုကြည့်ရှုကြကုန်အံ့။ အဆိုပါ Hamachi 1 မှာ slot နှစ်ခု၏နံပါတ်တိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လို။
https://termotools.com my.termotools.com © Hamachi 2019